Eyona ArtificialCrystalGrower-Rare-EarthCompositeCeramicThermalField yoMvelisi kunye neFektri | Funmeet
Rare Oxide Composite SS yodongwe Intloko yeThermal
I-Synthetic Crystal luhlobo olunye lweekristali ezibalulekileyo kwezomkhosi nakwizicelo zoluntu.
Ukuza kuthi ga ngoku, amashishini ehlabathi onke e-Synthetic Crystal asebenzise isinyithi, iZrO2 Fibre, eshinyeneyo iZrO2 izitena njl njl. I-sapphire ingot ingcolisiwe, i-shrinkage, ikhubazekile, yawa yintsimi ye-thermal, njl. Kuvela iingxaki.
I-oxide yomhlaba ongaqhelekanga (RE) i-yttria ezinzileyo i-zirconia (YSZ) yenye yeendlela ezisebenzayo zokuphucula ukusebenza kwe-thermal insulation kunye nozinzo lobushushu obuphezulu bezingubo zomqobo ze-YSZ.
Umkhombe R & D rhoqo, ukuphuculwa, ukuveliswa ngempumelelo enye yeentsimbi eziphambili ze-ceramic thermal --- Solid Solution Ceramic Composite Field Thermal. Inezinto ezingezantsi ezibonakalayo: Ulungelelwaniso olusezantsi. Zimbalwa iOxide Volatilization · Ukukhupha ioksijini ngokukhawuleza. Iindleko eziMandla eziMncinci. Ubomi obude bokuSebenza.
Siyila umhlaba we-thermal odibeneyo. Ngaphakathi nguHi- Temp. Umaleko oxhathisayo, Ngaphandle yiBubble ZrO2 ibhola yepolymer, ekhusela izitena zangaphakathi, kunye nomsebenzi omkhulu wokukhusela, yintoni eyenzelwe uzinzo lobushushu obunqamlezileyo, okwangoku kugcina ukusetyenziswa kwamandla.
Ngophuhliso lwe-turbine ephezulu yokusebenza kwegesi, iqondo lobushushu lokungena koxinzelelo lwe-turbine eqhubekayo inyuka, nto leyo izisa imeko enzima ngakumbi yenkonzo yamacandelo ashushu anje ngegumbi lokutsha, iblade kunye nomsila wombhobho. Ingxubevange yesinyithi ebushushu obuphezulu obuqhelekileyo bekunzima ukuhlangabezana neemfuno zenkonzo. Kwiminyaka yakutshanje, isithintelo sokuthintela ubushushu sisetyenziswe ngokubanzi. Okwangoku, yeyona yttria isetyenziswa ngokubanzi ukuzinzisa i-zirconia (YSZ) isithintelo se-thermal esithintela izinto zodongwe. Ngenxa yeengxaki zenguqu yeqondo lobushushu, ukukhawulezisa isintering, ukudlulisa ubushushu kwimitha ebushushu kunye nokudumba kwetyuwa etyhidiweyo kubushushu obuphezulu, ukusetyenziswa kwayo ngakumbi kunqongophele.
Siyila kwaye sivelise indawo edibeneyo ye-thermal ye-Kyropoulos Way 120kgs Sapphire Ingot ngokwethu. Ekuqinisekiseni ukuba i-100% yemveliso igqityiwe, amandla embewu azise ngempumelelo i-downt 59KW ukusuka kwi-75KW. Ngoku ngokugcina umbane kwiziko ngalinye li-10000 deg, nokuba linokufikelela kwi-1 5000-18000deg.
Egqithileyo I-Zirconia Lip yezitena zomlilo weglasi
Okulandelayo: Iplani yokugquma kunye nezitena zomlomo zeglasi ephezulu ye-zirconium yeglasi kunye neglasi ye-shale